China OEM 3D 3D Eyelashes Mink Lashes vita tanana vita tanana Makeup Full Strip Lashes orinasa sy mpanamboatra | Weiti
OEM 3D Eyelashes Mink Lashes vita amin'ny tànana vita amin'ny volom-bolo vita amin'ny volomaso vita amin'ny tanana
1, kapoka voajanahary DOLORES
2, 14mm volo mink tena 100%
3, boaty famonosana marika manokana namboarina
4, tahiry vonona lehibe sy ny sambo ara-potoana
1, Cluster voajanahary voajanahary & maro sosona:Ny volomaso mink antsika tsirairay dia vita tanana. Izy io dia misy vokany misarona tonga lafatra, manjelanjelatra ary mamirapiratra. Afaka voaravaka amin'ny sisiny izy, manaova makiazy tsara tarehy. Mety amin'ny fitafiana isan'andro, sary fakana sary.
2, Mink Fur tsy misy habibiana Premium:Ny volomaso misy antsika dia tsy misy lozabe, izay vita amin'ny volom-borona miberia siberia, avy amin'ny rambon'ny volo voajanahary voajanahary voajanahary minks. Avy eo manadio sy mandoko alohan'ny hamonosana azy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny karavasy mink strip dia mahazo aina kokoa noho ny kapoka vita amin'ny synthetic. Malemy voajanahary, miforitra, hypoallergenic, toy ny daroka voajanahary ataon'ny olombelona, ​​ary tsy mahasosotra ny masonao.
3, Bandy vita amin'ny landihazo malefaka:Ny tsipika mainty manify dia manome ny masonao ho toy ny vokatry ny eyeliner, tsara tarehy kokoa sy manintona kokoa. Azo ampiasaina indray mihoatra ny in-20-25 miaraka amin'ny fikarakarana sahaza. Tsy mora ny mianjera miaraka amin'ilay tadim-bava maharitra.
4, Mavesatra maivana- Tsy misy fahatsapana:Ny lanjan'ny volomaso mink tsirairay dia 0,5 grama fotsiny. Enta-mavesatra "0" maivana, tsy misy fahatsapana mavesatra. Ka na ianao aza tsy mahatsapa ny lanjany, rehefa anaovanao azy. Mandritra izany fotoana izany dia azo antoka sy sariaka ho an'ny maso marefo na mpitafy masom-pifandraisana izy.
Teo aloha: Hot Sale 3D Mink Eyelashes Wholesale 100% Real Siberian Mink Lashes
Manaraka: Factory Volk Mink Volomaso Vendor 3D Lashes miaraka amina boaty eyelashes marika manokana
Volomaso Mink 100% voajanahary 3D
Volomaso mink diso
Lashes Strip feno
Varotra ambongadiny ambongadiny 100% Herisetra vita amin'ny tanana ...
kapoka mink, Fanitarana volomaso, eyeliner, Volomaso maso, lipgloss, Mpivarotra volomaso,